သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရေမွန်နေခဲ့တဲ့ အခန်းလေးကို ရက်လည်တဲ့နေ့လေးမှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်လိမ္မော်သီး – Cele Top Stars
June 29, 2021 By admin2News
ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အဆိုတော် လိမ္မော်သီး ကတော့ ထူးခြားတဲ့အသံပါဝါကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး သီချင်းတွေကို အင်အားအပြည့်နဲ့ သီဆိုတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယနေ့အချိန်အထိတိုင်အောင် သီချင်းတွေအများအပြား ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လိမ္မော်သီးက တစ်ကိုယ်တော်အခွေတွေလည်း ထွက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် လိမ္မော်သီးက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမရဲ့ညီမလေး ဝေလာရီ နဲ့ ဆိုရင်လည်း သီချင်းတွေဖန်တီးပြီး အတူတူသီဆိုခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ဒီနေ့လေးမှာ လိမ္မောသီး က မကြာခင် ရက်ပိုင်းက ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ရေမွန်ရဲ့ တိုက်ခန်းလေးကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြလာပါတယ် ။ ဒီနေ့ဆိုရင် ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားတာ ရက်လည်နေ့လေးလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ရေမွန်ရဲ့ ရက်လည်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ အမှတ်တရ တွေပြည့်နေတဲ့ အခန်းထဲက အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်… ။
ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ” နောက်ဆုံးခရီး လိုက်မပို့နိုင်ခဲ့ပေမယ့်… ရက်လည်တော့ရောက်ခဲ့တယ်… ကိုကြီး အေးချမ်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်ရှိနေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်… ငြိမ်းချမ်းပါစေကိုကြီး …. ” ဆိုတဲ့ စာလေးကိုလည်း ဝမ်းနည်းကြောင်း အမှတ်တရရေးသားဖော်ပြထားရာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာ အမှန်ပါပဲနော် ။ ရေမွန်လည်း ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် …။
ပရိသတျတှေ ခဈြခငျအားပေးရတဲ့ အဆိုတျော လိမ်မျောသီး ကတော့ ထူးခွားတဲ့အသံပါဝါကို ပိုငျဆိုငျထားသူဖွဈပွီး သီခငျြးတှကေို အငျအားအပွညျ့နဲ့ သီဆိုတတျတာ ဖွဈပါတယျ ။ ယနအေ့ခြိနျအထိတိုငျအောငျ သီခငျြးတှအေမြားအပွား ဖနျတီးခဲ့တဲ့ လိမ်မျောသီးက တဈကိုယျတျောအခှတှေလေညျး ထှကျရှိခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ လိမ်မျောသီးက ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သူမရဲ့ညီမလေး ဝလောရီ နဲ့ ဆိုရငျလညျး သီခငျြးတှဖေနျတီးပွီး အတူတူသီဆိုခဲ့ တာပဲ ဖွဈပါတယျ …။
ဒီနလေ့ေးမှာ လိမ်မောသီး က မကွာခငျ ရကျပိုငျးက ကှယျလှနျသှားတဲ့ ရမှေနျရဲ့ တိုကျခနျးလေးကို ကိုယျတိုငျသှားရောကျဖွဈခဲ့ကွောငျးဖျောပွလာပါတယျ ။ ဒီနဆေို့ရငျ ရမှေနျကှယျလှနျသှားတာ ရကျလညျနလေ့ေးလညျးဖွဈပါတယျ ။ ရမှေနျရဲ့ ရကျလညျနမှေ့ာ သူ့ရဲ့ အမှတျတရ တှပွေညျ့နတေဲ့ အခနျးထဲက အမှတျတရ ပုံရိပျလေးတှကေို ဖျောပွလာတာဖွဈပါတယျ… ။
ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ ” နောကျဆုံးခရီး လိုကျမပို့နိုငျခဲ့ပမေယျ့… ရကျလညျတော့ရောကျခဲ့တယျ… ကိုကွီး အေးခမျြးတဲ့ဘုံဘဝရောကျရှိနမေယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ… ငွိမျးခမျြးပါစကေိုကွီး …. ” ဆိုတဲ့ စာလေးကိုလညျး ဝမျးနညျးကွောငျး အမှတျတရရေးသားဖျောပွထားရာ စိတျမကောငျးဖွဈမိတာ အမှနျပါပဲနျော ။ ရမှေနျလညျး ကောငျးရာ သုဂတိလားပါစေ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ …။
မီးနို ကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သူငယ်ချင်ဖြစ်သူအတွက် အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြလာတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ